रोजगारी | गृहपृष्ठ | Page 13
धागो कटाइ उद्योगमा २ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगार
on: ७ आश्विन २०७२, बिहीबार ००:०० रोजगारी
कावासोती । ऊनी धागो कटाइ उद्योगले नवलपरासीका २ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । उक्त रोजगारीबाट प्रत्येकले न्यूनतम ६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने देवचुलीकी मीनाकुमारी महतोले बताइन्...	बिस्तृतमा
नयाँ संविधानमा रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था
काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले प्रायः सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रमुख समस्याका रूपमा देखिने गरेको...	बिस्तृतमा
प्यूठानका तीन गाविसमा ९० उद्यमी सृजना गरिँदै
on: २४ भाद्र २०७२, बिहीबार ००:०० रोजगारी
प्यूठान । लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप)मार्फत प्यूठानका तीन गाविसमा ९० जना नयाँ उद्यमी सृजना हुने गरिने भएको छ । लुङ, तोरवाङ र चुँजामा उद्यमी सृजना गर्न लागिएको हो । लघु उद्यम विकास कार्...	बिस्तृतमा
आवेदन फारम रद्द हुनबाट कसरी बच्ने ?
वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियाको भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिनेमध्ये ३ सय ६८ जनाको फारम रद्द भएको थियो । असोज पहिलो साता हुने परीक्षामा उनीहरू सहभागी हुन नपाउने भएका छन...	बिस्तृतमा
समयमै काम पूरा नगर्ने तनहुँका ५० विद्यालयको खाता रोक्का
on: १७ भाद्र २०७२, बिहीबार ००:०० रोजगारी
दमौली । गतवर्षको भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गतको काम समयमै पूरा नगर्ने तनहुँका ५० ओटा विद्यालयको खाता रोक्का गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँले बताएको छ । कार्यालयका शव इञ्जिनीयर शम्...	बिस्तृतमा
नेपालमा साढे ८ हजार मात्रै बेरोजगार !
काठमाडौं । नेपालमा बेरोजगारको सङ्ख्या कति होला ? श्रम, श्रमिक र श्रम बजारसम्बन्धी विज्ञहरूले प्रस्तुत गर्ने तथ्याङ्कमा एकरूपता भेटिँदैन । यससम्बन्धी आधिकारिक तथ्याङ्क राख्ने श्रम विभागमा भने...	बिस्तृतमा
अन्तरवार्तामा असफल हुँदा के गर्ने ?
कुनै पनि जागिरका लागि व्यक्तिगत विवरण तथा फोन अन्तरवार्तामा छनोटपश्चात् निर्णायक अन्तरवार्ताको पालो आउँछ । सबै यो चरणमा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तथापि, आफूले समयदेखि मन पराएको कम्पनी वा जागिर...	बिस्तृतमा
अल्ट्रालाइट पाइलट उत्पादन गर्दै एभिया क्लब
पोखरा । नेपालमा अल्ट्रालाइज जहाज भित्र्याएको एभिया क्लब, पोखराले यससम्बन्धी पाइलटसमेत उत्पादन गर्दै आएको छ । सन् १९९६ मा अल्ट्रालाइट जहाजबाट पर्यटकलाई उडाउँदै आएको कम्पनीले सन् २०११ देखि पाइ...	बिस्तृतमा
अटो मेकानिक्सको माग बढ्दो
on: १० भाद्र २०७२, बिहीबार ००:०० रोजगारी
काठमाडौं । नेपालमा बढ्दै गरेको अटोमोबाइलको व्यवसायसँगै अटो मेकानिक्सको माग पनि बढ्न थालेको छ । प्रत्येक वर्ष १ हजारको हाराहारीमा अटो मर्मतसँग सम्बन्धित जनशक्तिको माग रहेको अटो मेकानिक्स एशोस...	बिस्तृतमा
साझेदारीमा व्यवसाय शुरू गर्नुअघि विचार पुर्‍याऔं
कुनै पनि व्यवसाय साझेदारीमा शुरू गर्दा आर्थिक भार तथा जोखीम कम बेहोर्नुपर्छ । जाखीम कम गरेजस्तै साझेदारी व्यवसायमा मुनाफा पनि बाँडफाँट गनुपर्छ । त्यसैले, समग्रमा बढी कमाइ देखिए पनि बाँडफाँट...	बिस्तृतमा